विश्वभर काेराेनाबाट ३ लाख ७५ हजारको मृत्यु, के छ सार्क राष्ट्रको अवस्था? - Khabarshala विश्वभर काेराेनाबाट ३ लाख ७५ हजारको मृत्यु, के छ सार्क राष्ट्रको अवस्था? - Khabarshala
विश्वभर काेराेनाबाट ३ लाख ७५ हजारको मृत्यु, के छ सार्क राष्ट्रको अवस्था?
काठमाडौं- विश्वभर ६२ लाख ६४ हजार ७ सय ४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले प्रकाशित मंगलबार बिहानसम्मको तथ्यांक अनुसार संक्रमितको संख्या अमेरिकामा सर्वाधिक १८ लाख ९ हजार १ सय ९ छ।
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ९८ हजार ३ सय ७० पुगेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या ५ हजार ६ सय ८ पुगेको छ। भारतमा हालसम्म ९५ हजार ७ सय ५४ संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन्।
पाकिस्तानमा हालसम्म ७२ हजार ४ सय ६० जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमितमध्ये पाकिस्तानमा १ हजार ५ सय ४३ जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानमा हालसम्म २६ हजार ८३ जना उपचारपछि निको भएका छन्।
श्रीलंकामा संक्रमितको संख्या १ हजार ६ सय ४३ छ। संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या ११ छ भने निको हुनेको संख्या ८११ छ।
बंगलादेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४९ हजार ५ सय ३४ पुगेको छ। बंगलादेशमा हालसम्म ६ सय ३२ जनाको मृत्यु भएको छ। उपचारपछि निको हुनेको संख्या बंगलादेशमा १० हजार ५ सय ९७ छ।
अफगानिस्तानमा संक्रमितको संख्या १५ हजार ७ सय ५० पुगेको छ। अफगानिस्तानमा २ सय ६५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १ हजार ४ सय २८ जना उपचारपछि निको भएका छन्।
भुटानमा संक्रमितको संख्या ४३ पुगेको छ। उपचारपछि निको हुनेको संख्या ६ छ।
माल्दिभ्समा संक्रमितको संख्या १ हजार ८ सय २९ छ। मृत्यु हुनेको संख्या ६ छ भने उपचारपछि निको हुनेको संख्या ४८८ पुगेको छ।